Ufuna ukwazi umbono wesazi onesihloko esithi: "Donormil no-alcohol." Ngaphandle kokuthobeka okukhulu, ngiyakwazi ukunikeza umbono wami ogunyazayo. Kusemthethweni, isibonelo, ngoba ngisindise umuntu okwenziwe ngokweqile komnikezeli.
Kungakanani kwalesi sidakamizwa umfana ophuza, yena ngokwakhe akayikukhumbula. Kodwa ngikhumbula ngokugcwele izingalo zakhe ezithuthumelayo, isimo sokugula emini, umuzwa ongapheli wokukhathazeka nokwesaba. Kwakukhona nokudumala. Kungenzeka ukuthi ngaphandle kokuthola usizo olufika ngesikhathi, isisulu sizowela ku-coma. Ngokuvamile, kwakukhona ukuningi kwesisu esiswini. Kwaba lula kuye, kodwa kunoma yikuphi i-ambulensi ibizwa.
Kamuva mayelana ne-donormil no-alcohol ngifunda kwiforamu ye-intanethi. Imibono ihluke ngokulimala kwesicelo sabo sokuhlanganyela. Abanye ababambe iqhaza kule ngxoxo bathi akunakwenzeka ukuba bathole ubuthi emaphilisi amancane anesisindo salesi sidakamizwa. Omunye wabuza ukuthi kwenzekani uma uphuza "amabhodlela" amathathu omnikeli nebhokisi le-vodka. Imibuzo emangalisayo? Izimpendulo zazihlanganisa, okulandelayo: "Konke kuzoba kuhle, uzobe ugoba kancane!".
Ngokwethembeka, ngolunye usuku esibhedlela ngathatha umnikeli njengephilisi yokulala, futhi angizange ngithande umphumela wayo. Slept evamile, kodwa emva kokuvusa kwakunomile emlonyeni, ukulibala kanye nezinye izinzwa ezingathandeki. Umakhelwane egcekeni wadumisa kakhulu lesi sidakamizwa futhi, njengoba nje ngikuqonda, umnikeli nophuzo olubhekwa njengento enhle kakhulu.
Kodwa, uhlobo luni lomuthi lokhu, futhi kufanele lusetshenziswe ngayiphi injongo?
Lokhu okulandelayo kwaziwa ngemifanekiso yalolu muthi. Ayikho i-analog yomuthi. Okusho ukuthi, kukhona, imithi, enomphumela ofanayo. Kuma-analogues aphelele. Kunoma yikuphi, umbuzo wokushintshwa kwabaxhasi uxoxwa ngokuqondile nodokotela.
Ngakho, i-donormil ingumphikisi we-H1-histamine receptors ne-M-cholinoblocking isenzo. Ngenxa yethonya layo lokutholisa nokuxhumela, lihlelwe izinkinga ezihlukahlukene zokulala. Ikhiqizwa ngokuyinhloko ngesiphilisi esincaniwe, emazweni amaningi athengiswa ngaphandle kwemithi. Lokhu akusho ukuthi ukusetshenziswa kwakhe okungalawuleki akuholeli emaphakathini ahlukahlukene.
Imiyalo yokusetshenziswa kwesidakamizwa, isibonelo, ngokucacile nangokucacile ithi i-donormil ne-alcohol ziphikisana ngokweqile. Lokhu kusebenza nokusetshenziswa okuhlangene nezidakamizwa ezinokuphuza utshwala. Akukwanele yini ukuyeka izingxoxo nokuphikisana ngale ndlela?
Eqinisweni, ngokuvamile akuvumelekile ukuthatha imithi eminingi ehlangene neziphuzo ezidakayo. Lokhu kusebenza ngisho nasesidakamizweni esibonakala singenabungozi, njenge-paracetamol.
Utshwala kanye namanani amancane kakhulu kuqinisa isenzo somnikeli futhi kungaholela ekudleni ngokweqile. Ezimweni ezinjalo, ngisho nokuhlukunyezwa kanye ne-coma kungenzeka. Izimpawu ezijwayelekile zokudlula ngokweqile:
Ukuthuthumela kwamalungu (ukuthuthumela),
Ukulala, ukungahambi kahle, ukunganakwa.
Eqinisweni, uma uthatha i-donormil nodakwa ndawonye, kufanele futhi wazi ukuthi imiphumela ingaba umphumela obulalayo. Futhi ngokuqapha okukhulu lesi sidakamizwa sinqunywe kanye nama-opioid, ama-neuroleptics, ama-derivatives e-barbituric acid.
Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-15.
Ukungaboni ngaso sonke isikhathi.
Izifo ze-prostate gland, urethra.
Usizo ngethenga nge-donormilom, kuhlanganise nokuhlanganiswa kotshwala
Ukwamukelwa kwamaphilisi ezakhiwe nge-carbon. Abantu abadala - ama-gramu angu-50. Izingane 1 igremu ngekhilogremu yesisindo.
Ungazami, usebenzisa i-donor no-alcohol. Uma kwenzeka ubuthi, shayela udokotela ngokushesha! Ngifisa wena impilo!
Ukuhlanzeka kwesikhumba kufanele kube yisiqinisekiso sempilo
Izikhombo iphuzu - kuyini? Yiziphi amaphuzu isithenjwa ukwakhiwa, wezokwakha, ibhizinisi noma isayensi?
Izimbali ezinhle - umhlobiso ezimpilweni zethu
Umphumela Okwezomnotho nekghono kwezomnotho: ukubala ifomula
Kuyini amabele? Indlela ewusizo lo mkhiqizo?
Gaming Mouse Logitech: Uhlolojikelele emakethe, izici, izithombe kanye onobuhle engcono
Indlela yokuxhuma "Nomaphi ekhaya" kuya ku- "Beeline", i-MTS ne "MegaFon"?
Epilator "Braun" is ngokukhethekile eyenzelwe wena